I-Asus Zenfone Max Pro (M2) kunye neZenfone Max M2 Iinkcukacha ezivuzayo | I-Androidsis
Ulwazi olutsha luza kukhanya malunga neefowuni zika-Asus ezizayo. Ngeli xesha, sithetha ngeZenfone Max Pro (M2), isiphelo sayo besisele siyazi enye idatha, kunye neZenfone Max M2.
NguRoland Quandt osinika iinkcukacha ezintsha zezi ndawo, kwaye wenza njalo esebenzisa olona hlobo lusebenzisayo: I-Twitter. Apha ngezantsi, funda malunga neenkcukacha eziphambili zobuchwephesha kunye neempawu zeli fowuni ilandelayo eza kuqaliswa.
Ngokutsho kwe-leaker, iZenFone Max Pro (M2), enenombolo yemodeli 'ZB631KL'Iya kuba ne-6-intshi ye-diagonal FullHD screen, i-4 GB ye-RAM kunye ne-64 okanye i-128 GB yendawo yokugcina yangaphakathi. Oku kuya kunikwa amandla yiprosesa yeQualcomm's Snapdragon 660, eseseyimpucuko efanelekileyo ukusuka kuhlobo lweSpapdragon 636 eligunyazisa IZenFone Max Pro (M1).
I-ASUS ZenFone Max Pro M2 ZB631KL = 6in FHD +, 13MP, 4GB RAM, 64 / 128GB. I-Snapdragon 660 (SDM660), i-Triple Cam
I-ASUS ZenFone Max M2 ZB633KL = 6in FHD +, 13MP, 4GB RAM, 32 / 64GB. I-Snapdragon 636 (MSM8953), i-Dual Cam
I-ZB632KL (engekho iPro), i-ZB634KL (Pro) inokwenzeka ukuba iIndiya zahlukile
-I-Roland Quandt (@rquandt) Novemba 14, 2018
Malunga neekhamera, ifowuni iya kuba neenzwa ezintathu zokufota ngasemva kwayo. URoland Quandt ukwakhankanye i-13 MP yesisombululo se-MP, enokuba yikhamera yangaphambili.
Emva koko kuza ifayile ye- I-ZenFone Max M2 enenombolo yemodeli 'ZB633KL'. Le fowuni iya kuba ne-6-intshi FHD + isikrini, kodwa iya kunikwa amandla yiprosesa ye-Snapdragon 636 ene-4GB ye-RAM kunye ne-32 okanye i-64GB yokugcina eyakhelweyo. Emva koko, iyakusebenzisa ikhamera ye-13 MP kwicala elingaphambili kunye neekhamera ezimbini ngasemva.
Nangona ezi yinkcazo yobuchwephesha elindelwe kuzo zombini iifowuni, URoland Quandt wongeze ukuba akaqinisekanga ngobungakanani bescreen, isisombululo kunye nokugcinwa kweefowuni zombini., kodwa ewe malunga nomthamo wazo we-RAM, iiprosesa kunye nenani leekhamera abanazo. Ikwakhankanya ukuba i-ASUS ZB632KL kunye ne-ASUS ZB634KL ziindidi ezahlukeneyo zamaIndiya zeZenFone Max M2 kunye neZenFone Max Pro (M2), ngokwahlukeneyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Iinkcukacha eziphambili zivuziwe malunga ne-Asus Zenfone Max Pro (M2) kunye neZenfone Max M2
Ungayilawula njani i-Android yakho ngokuthambo kwezi zixhobo zimbini ngendlela enomdla